कोरोना संक्रमितको संख्या ह्वात्तै बढेपछि जापान सरकारले गर्याे राष्ट्रव्यापी संकटकाल घाेषणा, कहिलेबाट हुन्छ लागु ? — Imandarmedia.com
कोरोना संक्रमितको संख्या ह्वात्तै बढेपछि जापान सरकारले गर्याे राष्ट्रव्यापी संकटकाल घाेषणा, कहिलेबाट हुन्छ लागु ?
काठमाडौं । कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएपछि जापानमा लगाइएको राष्ट्रव्यापी संकटकाल थप तीन साताका लागि बढाइएको छ । जापानमा गत अप्रिल ७ देखि सात राज्यमा एक महिनाका लागि जारी राष्ट्रिय संकटकाल अप्रिल १६ मा देशव्यापी बनाइएको थियो ।
आजदेखि संकटकाल समाप्त हुँदै गर्दा जापानले संकटकाल आउँदो मे ३१ सम्मै कायम रहने जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो आवले घोषणा गरे । आवेका अनुसार अर्को सूचना नभएसम्म संकटकाललाई खुकुलो पारिने छैन । कोरोनाभाइरसविरूद्धको लडाईंका लागि आगामी कदम तयार पार्न संकटकाल बढाइएको उनले जानकारी दिए ।
कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको बढी समस्या रहेका टोकियो, ओसाकासहित १३ वटै प्रशासनिक क्षेत्रमा विशेष सावधानी अपनाउन पनि उनले आग्रह गरेका छन् । संकटकाल लम्व्याउने निर्णयलाई चिकित्सा क्षेत्रका विशेषज्ञहरूको सल्लाहाकार समितिले सोमबार बिहान अनुमोदन गरेको थियो ।
जापानमा अहिलेसम्म कोरोना भाइरसको संक्रमणले ५३६ जनाको मृत्यु भएको छ भने १५ हजार ७८ जना संक्रमित भएका छन् । विश्वभर महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को संक्रमणबाट विश्वमा ज्यान गुमाउनेको संख्या २ लाख ५२ हजार ३६४ पुगेको छ । विश्वका २१२ मुलुक र २ वटा पानीजहाजमा फैलिएको यो भाइरसबाट विश्वका ३६ लाख ४४ हजार ७९५ जना संक्रमित छन् ।